Obhadhiya 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Genesisi Eksodho Revhitiko Numeri Dheuteronomio Joshua Vatongi Rute 1 Samueri 2 Samueri 1 Madzimambo 2 Madzimambo 1 Makoronike 2 Makoronike Ezra Nehemiya Esteri Jobho Mapisarema Zvirevo Muparidzi Rwiyo rwaSoromoni Isaya Jeremiya Mariro Ezekieri Dhanieri Hosiya Joeri Amosi Obhadhiya Jona Mika Nahumi Habhakuki Zefaniya Hagai Zekariya Maraki Mateu Mako Ruka Johani Mabasa VaRoma 1 VaKorinde 2 VaKorinde VaGaratiya VaEfeso VaFiripi VaKorose 1 VaTesaronika 2 VaTesaronika 1 Timoti 2 Timoti Tito Firimoni VaHebheru Jakobho 1 Petro 2 Petro 1 Johani 2 Johani 3 Johani Judha Zvakazarurwa 1
1 Zvakaonekwa naObhadhiya: Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha pamusoro paEdhomu:+ “Pane mashoko atakanzwa kuna Jehovha, uye pane nhume yakatumwa pakati pemamwe marudzi ichiti, ‘Simukai, ngatisimukei tirwe naye.’”+ 2 “Tarira! Ndakakuita muduku pakati pemamwe marudzi.+ Iwe unozvidzwa kwazvo.+ 3 Kuzvikudza kwomwoyo wako ndiko kwakakunyengera,+ iwe uri kugara munzvimbo dzakachengeteka dzeibwe,+ pamusoro paunogara, uchiti mumwoyo mako, ‘Ndiani achandiburutsa pasi?’ 4 Kana ukaita kuti nzvimbo yako ive yakakwirira sezvinoita gondo, kana kuti kana ukaisa dendere rako pakati penyeredzi, ndichakuburutsa kubva ikoko,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 5 “Kudai dzaiva mbavha dzakapinda mauri, kudai vapambi vakapinda mauri usiku, waizodai wakaparadzwa zvakadini?+ Vangadai vasina kuba zvakawanda sezvavaida here? Kana kudai vaiva vatanhi vemazambiringa vakapinda mauri, vaizorega kusiya zvinosaririra here?+ 6 Haiwa zvinhu zvaIsau zvakaongororwa kwazvo zvakadini!+ Pfuma yake yakavanzwa yakatsvakwa kwazvo zvakadini! 7 Vakakuperekedzai kusvikira kumuganhu. Varume vawaiva nesungano navo vakakunyengedza vose.+ Varume vawaiva norugare navo vakakukunda.+ Vaya vaidya zvokudya newe vachaisa mambure pasi pako somunhu asina ungwaru.+ 8 Hazvizoitiki muzuva iroro here?” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndichaparadza vakachenjera muEdhomu,+ uye ndichaparadza ungwaru munzvimbo ine makomo yaIsau. 9 Varume vako vane simba vachavhundutswa,+ haiwa iwe Temani,+ nokuti mumwe nomumwe achaparadzwa+ nokuurayiwa+ munzvimbo ine makomo yaIsau. 10 Uchafukidzwa nokunyara+ nokuda kwechisimba chawakaitira munun’una wako Jakobho,+ uye uchaparadzwa nokusingagumi.+ 11 Pazuva rawakamira parutivi, pazuva rakatapwa uto rake rehondo nevanhu vaasingazivi+ uye vokune imwe nyika pavakapinda pagedhi rake,+ vakakanda mijenya pamusoro peJerusarema,+ iwe wakanga wakaitawo somumwe wavo. 12 “Waisafanira kutarira uchifara muzuva romunun’una wako,+ muzuva renhamo yake; uye waisafanira kufara pamusoro pevanakomana vaJudha pazuva rokuparara kwavo;+ uye waisafanira kuramba uchitaura uchizvikudza pazuva rokutambudzika kwavo. 13 Waisafanira kupinda pagedhi revanhu vangu pazuva renjodzi yavo.+ Iwe, iyewe, waisafanira kudongorera kuti uone dambudziko rake pazuva renjodzi yake; uye waisafanira kutambanudzira ruoko rwako papfuma yake pazuva renjodzi yake.+ 14 Waisafanira kumira pamharadzano, kuti uparadze vanhu vake vaitiza;+ uye waisafanira kubata uchidzorera vanhu vake vaipona pazuva rokutambudzika.+ 15 Nokuti zuva raJehovha rokurwisa marudzi ose rava pedyo.+ Uchaitirwa sezvawakaita.+ Zvawakaitira vamwe zvichadzoka pamusoro wako.+ 16 Marudzi ose acharamba achinwa sokunwa kwamakaita pagomo rangu dzvene.+ Achanwa omedza, zvoita sokuti haana kumbovapo. 17 “MuGomo reZiyoni ndimo muchava nevachapukunyuka,+ richava chinhu chitsvene;+ uye imba yaJakobho ichagarazve nhaka yezvinhu zvavo.+ 18 Imba yaJakobho ichava moto,+ imba yaJosefa ichava murazvo, uye imba yaIsau ichava mashanga;+ uye vachaabatidza, voaparadza. Kuimba yaIsau hakuzovi neanopona;+ nokuti Jehovha azvitaura. 19 Vachaita kuti Negebhu ive yavo, nenzvimbo ine makomo yaIsau,+ neShefera, nenzvimbo yevaFiristiya.+ Vachaita kuti nyika yaEfremu ive yavo,+ nenyika yeSamariya;+ uye Bhenjamini achaita kuti Giriyedhi+ ive yake. 20 Nhapwa dzomurusvingo urwu runodzivirira,+ ivo vanakomana vaIsraeri, dzichava nezvose zvaiva zvevaKenani+ kusvikira kuZarefati.+ Nhapwa dzeJerusarema, dzaiva muSefaradhi, dzichaita kuti maguta eNegebhu ave adzo.+ 21 “Vaponesi+ vachaenda kuGomo reZiyoni+ kunotonga nzvimbo yemakomo yaIsau;+ umambo huchava hwaJehovha.”+